यी मोडेल जसले आफ्नै पिताको शव अगाडि यस्तो हर्कत गरेपछी तस्बिर बन्यो भाइरल, आखिर के गरिन उनले जसले गर्दा संसार छक्क पर्यो ? – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय / यी मोडेल जसले आफ्नै पिताको शव अगाडि यस्तो हर्कत गरेपछी तस्बिर बन्यो भाइरल, आखिर के गरिन उनले जसले गर्दा संसार छक्क पर्यो ?
यी मोडेल जसले आफ्नै पिताको शव अगाडि यस्तो हर्कत गरेपछी तस्बिर बन्यो भाइरल, आखिर के गरिन उनले जसले गर्दा संसार छक्क पर्यो ?
admin December 26, 2021 अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 65 Views
जेनेले सोसल मिडियामा आलोचनात्मक कमेन्ट सहन नसकेर आफ्नो अकाउन्ट नै डिलिट गरेकी छिन् । तर जेनेको उक्त तस्बिरका स्क्रिनसट मानिसले लिन भ्याइसकेका थिए । अब यो सोसल मिडियामा व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । एक प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘यी इन्स्टाग्राम मोडलको पिताको निधन भएको छ र उनले पिताको शवको अगाडि फोटोसुट गरेकी छिन् । ’
अर्का एक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले लेखे, ‘के मैले एक संकीर्णतावादी र प्रदर्शनकारी संस्कृतिको समस्याबारे कुरा उठाएको हुँ ।’ यस्तै, अर्का एकजनाले लेखे, ‘यस्ता लाग्छ कि मानिसहरुले आफ्नो सबै भद्रता गुमाइसकेका छन् । ’
Previous पहिला चाेर आयाे भन्दै कराए, जब मान्छे भेला भए तब यस्तो गरे !
Next महिनावारी पछि सार्न औष`धि लिनु स्वास्थ्यको लागि कतिको हानिकारक छ ? डाक्टरको यस्तो छ सल्लाह (भिडिओ)